Endrika amam-bika : haneho ny « Ironic Paper » i Tahina Rakotoarivony | NewsMada
Par Taratra sur 13/01/2016
Fampirantiana hairahan’ny ankehitriny. Hanokafan’ny Is’Art Galerie La Teinturerie Ampasanimalo ny hetsika ataony amin’ity taona ity, haneho ny « Ironic Paper » i Tahina Rakotoarivony, ny 14 janoary izao. Efa nahasarika ity mpanakanto manana ny maha izy azy ity tao anatin’ny 15 taona mahery ny tranga misy eo anivon’ny fiarahamonina. Ho an’ny « Ironic Paper » manokana, haneho ireo karazana fifanoherana tazany i Tahina Rakotoarivony. Anisan’izany ny halemem-panahy sy ny herisetra, fahatsorana sy ny hosoka, fitiavan-tena sy fitiava-namana, fahavitrihana sy ny hakamoana, lalàna sy ny fihoaram-pefy, hakelezana sy ny halehibeazana, sns. Hita ao anatina tabilao tsirairay ireo fifanoherana ireo.
Raha nampiasa « toile » na lamba i Tahiana hatramin’izay, angon-taratasy (papier recyclé) kosa no hanatontosany ny « Ironic Paper ». Teknika mifangaro no ampiasainy amin’izany (peinture acrylique sy pochoir). Avy amina soratra, sary, teny, lohateny, hafatra, sns, nalaina tamina gazety boky, na gazety no hanehoany tontolo vaovaon’ny fifanoherana izay matetika ipoiran’ny resaka etsy sy eroa ao anatin’ny fiarahamonina.
Nandray anjara tamin’ny fampirantiana maro ny sanganasany. Tany ivelany sy teto an-toerana. Ny finiavany no nanokafana ny Is’Art Galerie tamin’ny taona 2011. Ny hananan’ny mpanakanto fomba fijery vaovao no nahatonga azy nanao izany. Fikambanana maro no nandraisany anjara ny fananganana azy. Toy ny Kantsa (Kanto an-tsaha). Taona 1998, nanao dingana voalohany tamin’ny « art contemporain ». Nitari-dalana azy tamin’izany i Richard Razafindrakoto. Taona 2005, nivelatra teo amin’ny sehatra eoropeanina ny sanganasany.